Ubuchule bukaTinkler bulondoloze isithunzi soMgungundlovu – Msunduzi News
KUCISHE kwabhimba izinto edolobheni lekhethelo KwaZulu-Natal kucishe kuguqa iqembu elilimele ku-ABSA Premiership (PSL) iMaritzburg United. Isizini yePSL yowezi-2018/2019 isikaze ngokubhimbisa izinto ekomkhulu lesifundazwe iKwaZulu-Natal njengoba iMaritzburg United icishe yadliwa yizembe, leli qembu laqeda linamaphuzu angama-27 emidlalweni engama-30, livalele amagoli ama-22 langenelwa amagoli ama-32.
Lipheke lithulula abaqeqeshi, emveni kokusiza iMaritzburg United iqede endaweni yesine kuligi iphinde idlale emdlalweni wamanqamu eNedbank Cup ngesizini yezi-2017/18, azizange zimhambele kahle izinto uFadlu Davids ngesizini eyedlule okwenza iqembu limkhombe indlela njengoba iqembu lalisemsileni emveni kwemidlalo eli-14 linamphuzi ali-11. Laqoka uMuhsin Ertugral owakhonjwa indlela emveni kokuhluleka ukunqoba ngisho umdlalo owodwa emidlalweni emihlanu. Ukufika kwa-Eric Tinkler okhomba ukuba ngumthente osamila, ufike kusele imidlalo eli-12, ebhekene nongakhwelwa mbongolo njengoba bekukhomba cishe kufanele ayinqobe yonke imidlalo ukuze livike izembe. Nembala kube njengezincomo zakhe lo mqeqeshi owake wasiza i-Orlando Pirates ifike kowamanqamu eCAF Confederation Cup ngowezi-2015, wanqobisa iCape Town City iTelkom Knockout inezinyangana izelwe. UTinkler wakwazi ukusiza leli qembu ligudluke emsileni okwalenza ligcine lidlale imidlalo yokucibiyela idlala neRoyal Eagles neTshakhuma Tsha Madzivhandila. IMaritzburg United yakhombisa ukungabi nontanga kule midlalo njengoba ibizidlela amahlanga ezimbangini kwazise yayinqoba yonke le midlalo. Lokhu kukhuthaze uSihlalo weqembu uFarook Kadodia ukuthi alule inkontileka kaTinkler emgcina eqenjini. Ukuguqela esigabeni esingezansi bekuyophoxa izinkumbi zabalandeli abekade betheleka ngezinkani enkundleni iHarry Gwala nakuba iqembu belingezi kahle. Izakhamuzi zaseMgungundlovu azinalo elinye iqembu elidlala kuPSL ngaphandle kweMaritzburg United okusho ukuthi bekuyoletha umunyu kwabaningi ukwehlela ngezansi kwaleli qembu.
Kwezinye izinto ashayelwe ihlombe kuzo uTinkler ukuvusa ikhono labadlali obekuthiwa abasadingeki emaqenjini abo, wagadla ngabo wakwazi ukunqoba le mpi yezembe. Labadlali bafaka uThabiso Kutumela (eyamboleka ku-Orlando Pirates), u-Allana Kateregga noJudas Mosemaedi (eyababoleka kuCape Town City). UTinkler ukhombise ukuba ungqondongqondo onamasu anqala njengoba amaqembu angabanikazi alabadlali aseyangabaza ukubanika laba badlali ngokuphelele ngenxa yokubona amava ababenawo kuleli qembu.
UMgungundlovu ungaqhubeka nokuzishaya isifuba ngokuba neqembu eligijima kuPSL. Konke lokhu kungenxa yobuchule bukaTinkler njengoba umlando wakhe kuleli qembu umfakazela.
Inqabakutholwa esikoleni sakobantu kwaMachibisa
UMsunduzi uzinikele ukuthi kuthunywe wona
Previous post: IFNB ivundulula amakhono eMsunduzi
Next post: Bezibuya KwaMpande ngezinjomane